January 04, 2017 – Waxaa Maanta xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka isu soo sharaxay Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka federaalka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, oo maanta Warbaahinta ku wargeliyay inuu yahay mas’uul u taagan xilka Gudoomiyaha Baralamaanka Soomaaliya.
Prof. Jawaari ayaa sheegay in laga codsaday in uu isku soo sharaxo xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya uuna aqbalay codsiga loo soo jeediyay, waxa uuna balan qaaday in uu halkeeda kasii wadi doono shaqada Baarlamaanka hadii isaga la doorto.
Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa balan qaaday in uu isbadal Hogaamineed oo muuqda uu soo kordhin doono hadii loo doorto Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, waxa uuna intaa raaciyay in halkeeda kasii wadi doono howlaha qabyada ka ah Baarlamaankii hore.
Jawaari oo kasoo jeeda Beelaha Digil iyo Mirifle ayaa kamid ah xubnaha loo saadaalinayo in uu ku guuleesankaro xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka, waxaana Jawaari uu taageero ka haystaa Musharaxiin badan oo aaminsan inuu yahay ninka ku haboon booskaasi.
Xildhibaan Maanta ku Geeriyooday Gudaha Garoonka Diyaaradaha Muqdisho April 1, 2017